Okisijeni jenareta Aquatec
AngelBiss oxygen concentrators solution paAquatic Application.Iyo ndiyo sosi yakachengeteka uye yakavimbika kupfuura mamwe ese inogona kushandiswa muacaculture uye inogona kutsiva chero imwe oxygen yekupa sosi. inoderedza huwandu hwehutachiona, nekudaro ichivandudza kugadzirwa kwehove nekuvandudza hutano hwese hwehove. Yepamusoro okisijeni zvemukati zvakakosha kune aquaculture uye kugadzirwa kwehove.
Okisijeni jenareta Ozone
AngelBiss okisijeni inogadzirisa mhinduro muozone jenareta. AngelBiss oxygen concentrator inogona kushandura okisijeni kuita ozone nekupa okisijeni kune ozone jenareta. Ozone inoita basa rakakosha mukuitisa, kubvisa hwema, kuchengetedza chikafu, uye kuchenesa mvura.